Maitiro ekuita mari kubva kudonha uku? | Ehupfumi Zvemari
Hapana mubvunzo kuti hupfumi huchachinja zvakanyanya sekudonha uku. Chimwe chezvikonzero zvekutsanangura maitiro aya ndechekuti European Central Bank (ECB) iri kuzomira kukurudzira misika yezvemari uye izvi zviri kuzoonekwa mumutengo wezvikamu zviri pamusika wemasheya. Iwe ungatofanira kumirira mwedzi mishoma, asi iko kuverengera uko pasina mubvunzo kuchabata chikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Icho chinhu chekutanga chinofanirwa kutarisirwa kubva panguva dzino chaidzo.
Kune rimwe divi, uye zvine chekuita nemari dzeSpanish, zviratidzo zvekutanga zve kuderedza yehupfumi hwenyika. Icho chokwadi icho zvakare ichaenda kumisika yemari. Nechekafanoonekwa mumutengo wemasheya. Ehezve, iyo hombe kuwongorora kwakaitika mumakore achangopfuura hakuchisiri kuzotarisirwa. Ino inguva yakadzika munhoroondo, zvirinani kwenguva. Chero zvazvingaitika, ndechimwe chinhu chinofanira kutariswa nevatengesi.
Semhedzisiro yeaya maviri akakosha ehupfumi mafambiro, vashandisi vestoko havazove nesarudzo kunze kwe chinja zano rako kuita kuti mari yako ichengete mari. Mune zvimwe zviitiko, nekusiyana kudiki munzvimbo dzekuchengetedzeka, asi kune vamwe, pasi pekuchinja kukuru munzira kwayo. Kuti usazove kunze kwekutamba, hapana imwe sarudzo kunze kwekugadzirisa mafambiro aya. Kuti basa iri riitwe nemazvo zvakafanira kuti isu tichazokupa mamwe emakirasi pane panogona kutungamirirwa misika yezvemari kubva ikozvino.
1 Richava sei gore rino rako rekudyara?
2 Tsvaga dzimwe mhando
3 Wedzera kubatsirwa kwemadhipatimendi
4 Tora mukana wekuderera mumitengo
5 Chibvumirano chinodzosera zvigadzirwa
6 Gadzira zvigadzirwa zvenguva pfupi
Zano rekuvandudza purofiti yemari rinoenderana nekusarudza mamwe machengetedzo ekukuvadza zvirevo zvine hukasha. Neiyi nzira, iwe zvakare uchave uri kubudirira kubudirira kuchengetedza yako wega kana yemhuri nhumbi. Kubva pane ino mamiriro, imwe yeakanakisa mazano anoonekera kuburikidza nemakambani akanyorwa anogovera zvikamu pakati pevachagovana navo. Kwete pasina, iyo yakatarwa uye yegore kufarira yavanopa iri kutenderedza 5%. Zvakawanda kupfuura izvo zvinopihwa panguva iyoyo nemari yakatarwa uye izvo zvisingawanzo pfuura nhanho dze1%.
Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kutarisa kukosha kubva zvikamu zvakachengeteka uye kuti vane pundutso huru mumabhizinesi avo. Muenzaniso wakajeka weiyi maitiro unomiririrwa nemakambani emagetsi uye mabhizinesi akabatanidzwa kune yakakosha simba. Mupfungwa iyi, hapana imwe sarudzo kunze kwekuenda kune hunhu uko kuchengetedzeka kunokunda pane kumwe kufunga kwehunyanzvi. Kunyangwe zano iri ringa taure kuti mashandiro aro akaderera munguva yatakatungamira kudyara. Mumisika yemari mune zvikwanisiro zvakakwana zvemusika wemasheya zvinosangana nehunhu hwakakosha.
Tsvaga dzimwe mhando
Mune aya marudzi ezviitiko, panogara paine sarudzo yaive nevashambadzi vashoma vaive nayo kubva pakutanga. Aya mabheti ari chaizvo anobatsira kwazvo kupfuura zvese, kunyangwe hazvo pasina sarudzo asi kuvatsvaga nekutsungirira. Zvichienderana nekushanduka kwemisika yemari, unogona kuve iyo petroleum, imwe simbi yakakosha kana kunyange kofi pachayo. Sezvavanotaura pamusika wemasheya, panogara paine mikana yebhizinesi kunyangwe panguva dzisingafadzi dzemisika yemari. Ehezve, zviri nyore uye ndechimwe chinhu chaunofanirwa kunge uine sekudonha uku kuchangotanga.
Kune rimwe divi, kutsvaga kweimwe nzira yemari yekudyara kunogona kubatsira zvakanyanya pane zvaunofarira. Kunyangwe mukutsinhana nekutora dzimwe njodzi, saka zvinokurudzirwa zvikuru kuti iwe usarudze mashoma mashoma mashandiro emusika wemasheya. Nekuti pakupera kwezuva kufarira kwaunogona kuwana kunogona kukubhadharisa zvakakwana. Kunyangwe kupfuura pakuvhiya kukuru kunoitwa pasi pehuwandu hwakanyanya hwemari. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuita masvomhu kuti uone kuti ndekupi kutsauka kwaunofanirwa kuita kubva kuaccount yako yekutarisa.
Wedzera kubatsirwa kwemadhipatimendi
Imwe yemhedzisiro yakakosha yezvinobvira simuka mumutengo wemari munzvimbo yeeuro inogara iri muchokwadi chekuti purofiti yezvinhu zvikuru zvekuchengetedza inokwira. Kubva ikozvino zvichienda vachakupa imwe mari yemari yakachengetwa. Musiyano hauzove wakawanda, asi zvirinani kuti zvikwane kukupa iwe whim shoma kubva gore rinouya. Mupfungwa iyi, mari yemabhengi emari ichave vamwe vevanonyanya kubatsirwa nekusimudza yavo yemari yemubereko nezvikamu gumi kubva muzana zveperesenti poindi. Uye sechigadzirwa chinokunda cheichi chiitiko chinozotora chimiro kubva mukudonha uku.
Inogona kunge iri nguva yekuve unononoka kuchengetedza munzvimbo dzako uye dzokera kunguva dzinochengetwa. Kunyanya kana ivo vachiperekedzwa nerupo kupa uye kukwidziridzwa kubhangi. Semuenzaniso, izvo zvakagadzirirwa vatengi vatsva vebhangi. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti kubva panguva ino, kuchengetedza kunobatsira zvakanyanya kupfuura kudyara pachako. Zvakapesana chaizvo nezvakanga zvichiitika kusvika zvino. Zvakanaka, inogona kunge iri nguva yekusiyanisa marongero ako ekudyara uye kuve usingafambire sezvawaive kuita kusvika zvino. Nekuti pakupera kwezuva chii chiri kuita kuti mari ibatsire. Hapana chimwezve, hapana zvishoma.
Tora mukana wekuderera mumitengo
Imwe hurongwa hwekudyara hwakavakirwa pakuona iyo mabhizimusi mikana asi mukati memisika yemasheya ivo pachavo. Kunyangwe ichiita senge isinganzwisisike uye pamwe kunyangwe ine yakajeka meseji inopokana. Zvakanaka, chiitiko ichi chinoita kuti iwe uve akagadzirira zvakakwana kutenga zvikamu zvekuchengeteka pamutengo wakaderera zvikuru. Nekuda kweichi chiitiko, hapana mubvunzo kuti purofiti yekushanda kwemusika wemasheya ichave yakakwira zvakanyanya kupfuura kusvika zvino. Pamwe mune iyo yakanyorwa kambani iyo yawaifarira zvakanyanya, asi iyo iwe hauna kusarudza kutenga nekuti iwe waifunga kuti mitengo yavo yaive yakanyanya kukwirira.
Nekudaro, zano rekudyara iri rine chisina kunaka uye nderekuti haugone kuzviita munguva pfupi. Kana zvisiri, pane kudaro, zvakaitirwa nguva refu yekugara uye kazhinji kuravira kwevashandisi vanochengetedza kana vechinyakare. Mupfungwa iyi, inogona kuturikirwa semukana mutsva unopihwa nemisika yemari kuitira kuti iwe ugone kudzokera kune nyika yezvikwereti zvese.
Chibvumirano chinodzosera zvigadzirwa
Kunyangwe mune imwe yakatonyanya kuganhurirwa nzira, zvakare iri yakasarudzika chiitiko chekudzokera kune inverse zvigadzirwa. Ndokureva, izvo zvinounza yavo yemari inowanikwa mukufamba kwekufamba kwemisika yemari. Nemibairo inogona kuve nerupo kana mamiriro aya akasangana. Asi zvakare pamutengo wekufungidzira njodzi huru mukushanda nekuda kweiyo kuoma kwekufamba uku. Nekuti kana iwo asingafarire ichokwadi chaizvo kuti iwe unogona kusiya akawanda, pamwe akawandisa, euros mune yega yega mashandiro anotongwa neichi chakasarudzika hunhu kune vamwe vanoita mari.
Kune rimwe divi, iro rinoumbwa senzira yakasarudzika yekuzvidzivirira kubva munzvimbo dzakavhurika mumisika yemari. Nekuti zvirokwazvo, hongu zvichabatsira kurasikirwa kwemusika wemusika hazvizivikanwe zvakanyanya sekudonha uku kwatichangotanga. Nepo imwe yehunhu hwayo hwakakosha inogara muchokwadi chekuti zvigadzirwa zvinopesana zvinoshanda chaizvo pakuchinja kweshanduro uye pamusoro pedzimwe sarudzo mune yakatarwa mari.
Gadzira zvigadzirwa zvenguva pfupi
Sechirongwa chekupedzisira chekudyara, kubhadharwa kwema modhi ekudyara anoenderana nemamiriro matsva emisika yemari yakamira. Ivo ndezvenguva pfupi asi hazvo chaizvo zvakanakira monetize mari pasi pekunyatsoshanda kubva pane ese maonero maonero. Nekudaro, iyi yekudyara modhi yakachengeterwa anonyanya hasha ekudyara profiles iwe aunogona kuisa pangozi munzvimbo dzawo. Kana iyi iri nyaya yako, usakahadzika nazvo, nekuti kufarira kwaunogona kuwana kuri kupfuura kufungidzira, kunyangwe zvichitora zvine hungwaru kupfuura zvimwe zvinzvimbo zvinogamuchirwa nevazhinji vashandisi.
Kubva pane aya mamodheru ekudyara zviri nyore kwazvo kuzadzisa zvinangwa zvako zvepamusoro, asi pasina kupokana hapazovi nesarudzo kunze kwekukudziridza yakawanda yekudyara inoteedzera. Kana paine chero nguva iwe unofanirwa kugadzirisa zvinzvimbo kuti udzivise kurasikirwa kwakanyanya mune yakadyarwa capital. Kwete pasina, ndiwo mamiriro ezvinhu aunofanirwa kutarisira nekontrakta yerudzi urwu rwezvigadzirwa zvemari. Nekuti ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete ichi, siya zvakanyanyisa euros munzira. Kusvika padanho rekuti havazi vese vatengesi vanogona kumira nemamiriro akaomesesa anogona kupihwa kwauri chero nguva. Nekuti ndiyo inonyanya kukosha peiyi kirasi yezvigadzirwa zvakagadzirirwa kudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Maitiro ekuita mari kubva kudonha uku?